Blind Trust - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Fahatokisan'ny jamba
Tamin'ity maraina ity dia nijanona teo anoloan'ny fitaratra aho ary nametraka ny fanontaniana: fitaratra, fitaratra amin'ny rindrina, iza no tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena rehetra? Ary hoy ny fitaratra tamiko: Azonao atao ve ny miala ao?
Mametraka fanontaniana aminao aho: «Mino ve ny zavatra hitanao na matoky tanteraka ve ianao? Androany isika dia mijery akaiky ny finoana. Te-hanazava zavatra tokana aho: velona Andriamanitra, misy izy, mino izany na tsia! Tsy miankina amin'ny finoanao Andriamanitra. Tsy nentina teto io rehefa miantso ny olona rehetra hino isika. Tsy ho Andriamanitra tsy latsaka noho izany koa isika raha tsy te hahalala na inona na inona momba azy!
Inona ny finoana?
Miaina ao anatin'ny faritra roa isika: Amin'ny teny hafa, miaina ao anatin'ny tontolo takatra ara-batana isika, ampitahaina amin'ny vanim-potoana epemeralda. Mandritra izany fotoana izany dia miaina amin'ny tontolo tsy hita maso koa isika, ao amin'ny faritra mandrakizay sy any an-danitra.
"Fa ny finoana kosa dia fahatokiana mafy ny amin'izay antenaina, ary tsy fisalasalana amin'izay tsy hita." (Hebreo 11,1).
Inona no hitanao rehefa mijery ny fitaratra ianao? Jereo ny vatanao mihorakoritra miadana. Mahita vony ve ianao, voretra na volo eo am-pandriana? Moa ve ianao mahita ny tenanao ho toy ny olona mpanota manana fahadisoana sy fahotana rehetra? Sa ve ianao mahita endrika feno hafaliana, fanantenana ary fahatokisana?
Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy noho ny fahotanao, dia maty noho ny fahotan'ny olombelona rehetra izy. Miaraka amin'ny soron'i Jesosy dia navotsotra tamin'ny fanasaziana anao ary tao amin'i Jesoa Kristy dia nahazo fiainana vaovao ianao. Teraka avy any ambony amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina izy ireo mba hiaina fiainana feno ao anatin'ny lafiny ara-panahy vaovao.
« Raha niara-natsangana tamin’i Kristy hianareo izao, dia katsaho ny any ambony, izay itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra. Katsaho ny any ambony fa tsy ny ety an-tany. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa hiseho Kristy ny fiainanareo, dia hiara-miseho aminy amin’ny voninahitra koa ianareo » (Kolosiana 3,1- iray).
Mipetraka miaraka amin'i Kristy ao amin'ny fanjakany any an-danitra isika. Maty ilay taloha ary velona indray aho. Olom-baovao ao amin'i Kristy isika izao. Inona no dikan'ny hoe "olom-baovao ao amin'i Kristy?" Manana fiainana vaovao ao amin'i Kristy ianao. Iray sy Jesosy ianao. Tsy hisaraka amin'i Kristy intsony ianao. Ny fiainanao dia miafina miaraka amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Fantatra miaraka amin'i Kristy hatrany ianao. Ao ny fiainanao. Izy no fiainanao. Tsy mponin'ny tany eto an-tany ianao, fa mponin'ny lanitra koa. Heverinao ve izany?
Inona no tokony ho hitan'ny masonao?
Ary rehefa lasa zavaboary vaovao ianao, dia mila ny fanahin'ny fahendrena:
“Koa rehefa reko ny finoanareo an’i Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra anareo aho sy mahatsiaro anareo amin’ny fivavahako” (Efesiana). 1,15- iray).
Inona no angatahin'i Paoly? Toe-piainana hafa, fanasitranana, asa? Tsia! "Ny Andriamanitr'i Jesoa Kristy Tompontsika, Rain'ny voninahitra, hanome anao ny Fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana hahalala azy".
Nahoana Andriamanitra no manome anao ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana? Koa satria jamba ara-panahy ianao, dia manome maso maso anao Andriamanitra, hahafahanao mahafantatra an'Andriamanitra.
“Enga anie Izy hanome anareo mason’ny fo mazava, mba ho fantatrareo izay fanantenana niantsoana anareo, fa ny haren’ny voninahitry ny lovany ho an’ny olona masina” (Efesiana). 1,18).
Ireo maso vaovao ireo dia hahita ny fanantenana mahafinaritra sy ny voninahitry ny lovanao izay niantsoana anao.
“Endrey ny haben’ny heriny ao amintsika izay inoantsika noho ny asan’ny heriny lehibe” (Efesiana). 1,19).
Hitanao amin'ny masonao ara-panahy fa afaka manao ny zava-drehetra amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy mampahatanjaka anao ianao!
“Tamin’ny heriny lehibe no niasany tao amin’i Kristy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty sy nanendry Azy ho eo amin’ny tanany ankavanana any an-danitra hanapaka ny fanjakana rehetra, ny hery, ny fahefana, ny fanapahana ary ny anarana rehetra izay antsoina, tsy amin’izao tontolo izao ihany. fa amin’ny ho avy koa » (Efes 1,20- iray).
Nomen'i Jesosy hery sy voninahitra rehetra amin'ny fahefana rehetra, ny hery, ny hery ary ny fanapahana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy dia mizara an'io hery io ianao.
“Ary ny zavatra rehetra nataony ho eo ambanin’ny tongony sady nataony lohan’ny fiangonana amin’ny tenany rehetra, dia ny fahafenoan’izay mameno ny zavatra rehetra amin’ny olona rehetra” (Efesiana). 1,22- iray).
Izay no fototry ny finoana. Raha afaka mahita an'ity zava-misy vaovao ity ianao izay ao amin'i Kristy, dia manova ny fisainanao manontolo. Ny zavatra iainanao ary tsapanao izao dia manome ny toe-piainana misy anao ankehitriny, refy vaovao. Jesosy hameno ny fiainanao amin'ny fahafenoany rehetra.
Ny ohatra manokana nataoko:
Misy ny fahavelomana sy ny olona eo amin'ny fiainako izay manelingelina ahy ara-pihetseham-po. Avy eo aho dia nankany amin'ny toerana tiako indrindra, mangina ary miresaka amin'i dada sy fanahy an'i Jesosy. Nohazavaiko taminy ny fahatsapako tsinontsinona sy ny fankasitrahako ny fahafenoany ahy amin'ny maha-olombelona azy rehetra.
“Izany no mahatonga anay tsy reraka; fa na dia mihasimba aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny anatiny. Satria ny fahoriantsika, izay ara-nofo sy mora, dia miteraka voninahitra mandrakizay sy mavesatra ho antsika, izay tsy hitantsika amin’ny hita, fa amin’ny tsy hita. Satria ny zavatra hita dia ara-nofo; fa ny tsy hita dia mandrakizay »(2. Korintiana 4,16- iray).
Ianao dia manana fiainana amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy. Izy no fiainanao. Izy no lohany ary ianao tafiky ny vatany ara-panahy. Ny fahorianao ankehitriny sy ny raharahanao amin'ny fiainanao ankehitriny dia miteraka voninahitra lehibe mandritra ny mandrakizay.
Rehefa mijoro eo alohan'ny fitaratra indray ianao dia aza mijery ny ivelany ivelany, tsy hita maso, fa eo amin'ny tsy hita maso izay maharitra mandrakizay!